परदेशीको आवाज | संविधानसभा चुनाव-२०७० :: स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि मोवाईल, न्यू मिडिया र रेडियो मार्फत नागरिक सहभागिता
Wed, Sep 20, 2017 | 04:17:45 NST
चार दलका नेताहरुले संविधानसभाको निर्वाचन संविधान निर्माण, शान्ति स्थापना, राजनीतिक स्थायित्व र देश विकासको लागि हो भन्दै छन् भने अर्को पक्ष नेकपा माओवादी लगायत ३३ दलले यो चुनाबले कुनै पनि समस्याको समा...
अगामी चुनावको लागि मेरो सुझाव छ । आधा जसो राजनैतिक पार्टीले चुनावमा भाग लिइरहेको छ भने आधा बाहिर नै छ । जसले गर्दा चुनावमा धेरै झडप जस्ता अप्रिय घटना हुन सक्छन् । त्यसैले सबै पार्टी एकताबद्ध भएर भाग ...
देशमा चुनाव होला, चुनाव भएपछि नेपालमा फर्कौंला, सानोतिनो व्यापार गरेर छोराछोरीसँगै बसौंला भन्ने सपना थियो । तर चुनावकै नाममा द्वन्द्व बढेर मेरो सपना पुरा नहुने हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ । हामी विदेशम...
मेरो हैन हाम्रो राम्रो बनोस् संविधान
आआफ्नो स्वविवेकले गरौँ मतदान अग्रगामी नेतृत्वमा खोजौँ पहिचान ।। हाम्रो खोज्नाले आजसम्म दुःख पाइयो राम्रो छान्ने प्रबृतिको थालौँ अभियान ।। एकै भोट हो जिताउने सही नेतृत्व चुक्यो भने...
५२ पत्ती ५३ खेल जुवा होइन चुनाव
५२ पत्ती ५३ खेल जुवा होइन चुनाव ढुकुटी सिध्याउने कुवा होइन चुनाव जिते जनताको चाहना हजुर हारे धाँधलीको वहाना होइन चुनाव क्यामेरा एक्सन कट् चलचित्रको पर्दा होइन चुनाव दाप भित्र लुकी राख्ने कर्द ह...
श्रीभक्त पौडेल, स्पेन
खराबहरुमध्ये कम खराब छानौं
एक युगमा एकचोटी आउने संविधानसभा हाम्रा लागि दुई चोटी आयो । कोही यो सौभाग्य भनिरहेका छन् त कोही दुर्भाग्य भन्दै नेताहरुलाई गाली गरिरहेका छन् । हिजो संविधान सभाबाट संविधान नबनेको विषयमा चुनावका बारेमा ...
मतदातालाई पो खबरदारी गर्नुपर्ने देखियो
नेताहरुले खुवाउने त चुनावसम्म मात्र हो चुनाव सकिए पछि त आफ्नै खानुपर्छ । यसपालीको चुनावमा नेतालाई भन्दा बढी मतदातालाई खबरदारी गर्नुपर्ने देखियो किनभनें मतदाताले अझै नेतालाई चिन्न सकेका रहेनछन् । अझै ...
संविधान बन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी ?
४ वर्षमा देशमा संविधान बनेन, आम नागरिकले तिरेको कर १५ अर्ब रुपैयाँ पनि सके, अबको निर्वाचनमा २५ अर्ब रुपैयाँ सक्ने त होला । संविधान बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यत्रो पैसालाई देश निर्माणमा लगाएको...
राजेन्द्र गौतम, झापा
के देश पुरानै बाटोमा फर्कदै हो ?
आम नागरिकले कसलाई आशा र भरोसा गर्ने, अहिलेको चुनावी चहलपहलमा त्यहि पीडा झल्किन्छ । राष्ट्रियताका बिषयमा एकमत छैन । अर्कालाई दोष र लान्छना लगाउने बाहेक केही गरेका छैनन् दलका नेताहरुले । यस्तो अवस...
तुल्सीराम अर्याल एकीकृत नेकपा माओवादी
दिनेश महर्जन एकीकृत नेकपा माओवादी
भेषराज आचार्य नेपाली कांग्रेस